Abheri womuBhaibheri Aiva Nokutenda Muna Mwari | Tevedzera Kutenda Kwavo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Ndebele Ndonga Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Kunyange Zvazvo Iye Akafa, Achiri Kutaura”
ABHERI akatarisa boka rake remakwai aifura chinyararire padivi pechikomo. Uye zvimwe akatarisa nechekure akaona chimwe chinhu chaipenya. Aiziva kuti ikoko kwaiva nebakatwa raibvira moto richitenderera nguva dzose, richiita kuti pasave neanopinda mumunda weEdheni. Vabereki vake vaimbogara mumunda wacho, asi iye zvino vakanga vasingachakwanisi kupindamo, kunyange vana vavo. Chimbofungidzira kamhepo kepanguva yokunodoka kwezuva kachipeperetsa bvudzi raAbheri paakatarisa kudenga achifunga nezveMusiki wake. Ukama hwevanhu naMwari uhwo hwakanga hwakanganisika, hwaizombogadzirisika here? Hapana chimwe chaidiwa naAbheri chinokunda izvozvo.
Abheri ari kutaura newe mazuva ano. Unomunzwa here achitaura? Ungati izvozvo hazvimbofi zvakaitika nokuti mwanakomana uyu wechipiri waAdhamu akafa kare kare. Marangwanda ake akaparara kare chaiko, makore anenge 6 000 akapfuura. Bhaibheri parinotaura nezvevakafa rinotidzidzisa kuti: “Havana kana chavanoziva.” (Muparidzi 9:5, 10) Uyewo hapana kana shoko rimwe chete ratinoona muBhaibheri richinzi rakataurwa naAbheri. Saka angagotaura sei nesu?
Muapostora Pauro akafuridzirwa kuti ataure nezvaAbheri achiti: “Nokutenda kwacho, kunyange zvazvo iye akafa, achiri kutaura.” (VaHebheru 11:4) Abheri anotaura nesu kuburikidza nokutenda kwake. Ndiye aiva munhu wekutanga kuva neunhu uhwu hwakanaka zvikuru. Aiva nokutenda kwakasimba zvokuti muenzaniso wake uchiri kushanda nanhasi. Kana tikawana zvidzidzo pakutenda kwake tobva tamutevedzera, zvinenge zvichitoita sokuti ari kutaura nesu.
Saka tingadzidzei kuna Abheri nokutenda kwake kunyange zvazvo asinganyanyotaurwi nezvake muBhaibheri? Ngatimboonai.
AKABEREKWA NYIKA ICHANGOTANGA KUGARWA NEVANHU
Abheri akaberekwa nguva pfupi pashure pokunge vanhu vokutanga vasikwa. Jesu akazotaura nezvaAbheri paaitaura nezve“kuvambwa kwenyika.” (Ruka 11:50, 51) Zviri pachena kuti nyika yaitaurwa Jesu inoreva vanhu vane tariro yokununurwa pachivi. Kunyange zvazvo Abheri aiva munhu wechina kurarama panyika, zvinoita sokuti ndiye aiva wekutanga kuonekwa naMwari seakakodzera kununurwa. * Zviri pachena kuti Abheri haana kukura nevanhu vaimukurudzira kuita zvakanaka.
Kunyange zvazvo vanhu vakanga vasina nguva refu vari panyika, vakanga vasisiri kufara. Vabereki vaAbheri, Adhamu naEvha vanofanira kunge vaiva vakanaka uye vakagwinya. Asi vakanga vaita chikanganiso chakakura uye vaitozviziva. Pakutanga vakanga vasina chivi vaine tariro yokurarama nokusingaperi. Asi vakabva vapandukira Jehovha Mwari ndokudzingwa mumusha wavo waiva Paradhiso mumunda weEdheni. Vakava nechivi ndokurasikirwa neupenyu husingaperi pamusana pekuti vakangofunga nezvezvido zvavo, vasingafungiwo zvimwe kunyange zvaizonakira vana vavo.—Genesisi 2:15–3:24.
Pavakanga vadzingwa mumunda vava kugara kunze, Adhamu naEvha vakanga vaomerwa neupenyu. Asi pakazvarwa mwana wavo wekutanga, vakamutumidza kuti Kaini kana kuti “Chinhu Chakaberekwa,” uye Evha akati: “Ndabereka munhu ndichiyamurwa naJehovha.” Zvinoita sokuti Evha paakataura mashoko aya anofanira kunge aifunga nezvevimbiso yakaitwa naJehovha mumunda, paakati paizova nemukadzi aizobereka “mwana” aizoparadza akaipa uyo akanga atsausa Adhamu naEvha. (Genesisi 3:15; 4:1) Kuti Evha aifungidzira kuti ndiye mukadzi akanga afanotaurwa nezvake uye kuti Kaini ndiye aiva “mwana” akapikirwa here?
Kana aifungidzira kudaro akanga akatorasika. Uyewo, kana Adhamu naEvha vaiudza Kaini zvavaifungira izvozvo paaikura, vakatoita kuti kuzvikudza kwake kuzomuipira. Nekufamba kwenguva, Evha akabereka mwanakomana wechipiri, asi havana kuzomupa zita rairatidza kuzvikudza. Vakamutumidza kuti Abheri, zvinogona kureva kuti “Chinhu chisina maturo.” (Genesisi 4:2) Zita ravakamupa rairatidza kuti vaimutarisira pasi, zvichiita sokuti vaisava netariro pana Abheri kupfuura zvavaiita Kaini here? Hatizivi hedu, asi pamwe ndizvo.
Chero zvazvingava, vabereki vane zvakawanda zvavangadzidza kuvabereki vokutanga ivavo. Zviito zvenyu nezvamunotaura zvichaita kuti vana venyu vazvikudze uye vave neudyire here? Kana kuti muchavadzidzisa kuda Jehovha Mwari nokuita kuti vave neushamwari naye here? Zvinosuruvarisa kuti vabereki vokutanga vakatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi, vana vavo vaiva netariro.
ZVII ZVAKABATSIRA ABHERI KUTI AVE NOKUTENDA?
Kaini naAbheri pavaikura, Adhamu anofanira kunge akavadzidzisa kuita mabasa aifanira kuitwa kuitira kuti mhuri yavo iwane chokubata. Kaini akava murimiasi Abheri akava mufudzi wemakwai.
Zvisinei, Abheri akaita chimwe chinhu chaitonyanya kukosha. Nokufamba kwenguva, akava nokutenda, unhu huya hwakanaka hwakazotaurwa naPauro. Pafunge. Abheri haana mumwe munhu waaikwanisa kudzidza kwaari panyaya yokutenda. Saka akasvika sei pakuva nokutenda muna Jehovha Mwari? Ngationei zvinhu zvitatu zvinofanira kunge zvakamubatsira.
Ichokwadi kuti Jehovha akanga atuka nyika, zvichiita kuti imere minzwa norukato izvo zvaikanganisa zvirimwa. Asi nyika yaimera zvokudya zvokuti vomumhuri yaAbheri vadye vararame. Uye pane zvimwewo zvakanga zvisina kutukwa zvaisanganisira mhuka, shiri nehove, makomo, nzizi nemakungwa, matenga, makore, zuva, mwedzi nenyeredzi. Kwose kwaaitarisa, Abheri aiona uchapupu hwerudo, uchenjeri uye kunaka kwaJehovha Mwari, uyo akasika zvinhu zvose. (VaRoma 1:20) Kutenda kwaAbheri kwakasimbiswa paaifungisisa nezveunhu hwaJehovha nezvinhu zvaakasika.
Abheri aiva nenguva yekufunga nezvaJehovha. Ita seuri kumuona achifudza boka rake remakwai. Basa rokufudza makwai raida kuti munhu afambe zvikuru. Aiatungamirira nemuzvikomo, nemumipata, achiyambuka nzizi, uye aigara achitsvaka uswa hwakasvibira, matsime akanaka okuti makwai anwe mvura, uye nzvimbo dzakanaka dzine mimvuri dzokuti makwai azororere. Pazvisikwa zvose zvaMwari, makwai aiita sokuti ainyanya kuda kubatsirwa, aitoita sokuti akasikirwa kuti atungamirirwe uye adzivirirwe nevanhu. Abheri aizviona here kuti iye aidawo kutungamirirwa, kudzivirirwa uye kutarisirwa naMwari ane uchenjeri hwakakura uye ane simba zvikuru kupfuura chero munhu? Hapana mubvunzo kuti aitaura pfungwa dzakadaro paainyengetera, uye zvakaita kuti kutenda kwake kurambe kuchikura.
Zvinhu zvakasikwa zvakaita kuti Abheri ave nokutenda kwakasimba muMusiki ane rudo
Adhamu naEvha vanofanira kunge vakaudza vanakomana vavo nezvezvakaitika mumunda weEdheni zvakazoita kuti vadzingwe. Saka Abheri aiva nezvakawanda zvokufungisisa.
Jehovha akataura kuti nyika yaizotukwa. Abheri ainyatsozviona kuti mashoko iwayo aizadziswa nekumera kwaiita minzwa nerukato. Jehovha akafanotaurawo kuti Evha aizorwadziwa nepamuviri uye pakusununguka. Vatevedzeri vaAbheri pavaizvarwa, hapana mubvunzo kuti akazviona kuti mashoko aMwari aiva echokwadi. Jehovha akafanoona kuti Evha aizonyanyoda kudiwa uye kutarisirwa nemurume wake uye zvaizoita kuti Adhamu amutonge. Abheri aiona zvese izvi zvichiitika kuvabereki vake. Pane zvese zvaiitika, Abheri aiona kuti muromo waJehovha hauwiri pasi. Saka Abheri aiva nezvikonzero zvakasimba zvokutenda vimbiso yaMwari yokuti paizova ne“mwana” aizogadzirisa zvose zvakakanganisika muEdheni.—Genesisi 3:15-19.
Abheri haana kana munhu aiita zvakanaka waaigona kudzidza kwaari, asi vanhu havasi ivo voga zvisikwa zvaiva panyika zvaikwanisa kufunga nekusarudza. Adhamu naEvha pavakadzingwa mumunda, Jehovha akaita kuti ivo nevana vavo vasatombokwanisa kupinda mumunda wacho waiva Paradhiso. Kuti pasave neanopinda, Jehovha akaisa makerubhi, ngirozi dzine chinzvimbo chepamusoro, uye akaisawo bakatwa raibvira moto richitenderera nguva dzose.—Genesisi 3:24.
Chimbofungidzira Abheri achiri kakomana achiona makerubhi acho. Sezvo makerubhi acho akanga aiva nemiviri yakaita seyevanhu, Abheri aigona kuona kuti aiva akasimba zvikuru. Uye “bakatwa” riya rairamba richibvira moto, richigarotenderera, raimushamisawo chaizvo.Abheri zvaaikura, akamboona makerubhi acho achifinhikana zvokuti aibva panzvimbo yawo here? Kwete. Siku nesikati, gore negore, zvisikwa izvozvo zvaiva nesimba uye zvaikwanisawo kufunga nekusarudza zvairamba zviri panzvimbo yazvo. Saka Abheri akadzidza kuti Jehovha aiva nevashumiri vakatendeka uye vakarurama. Abheri akaona kuti makerubhi acho akanga akatendeka uye achiteerera Jehovha, unhu hwaaisamboona mumhuri yake. Muenzaniso wengirozi idzodzo wakasimbisa kutenda kwake zvechokwadi.
Upenyu hwake hwose, Abheri akaona kuti makerubhi aiva vashumiri vaJehovha vanoteerera uye vakatendeka
Abheri akaona kuti kutenda kwake kwaisimbiswa zvikuru paaifungisisa nezvaJehovha achiona zvinhu zvaakasika, uye achifungisisa vimbiso dzake nemienzaniso yevashumiri vake. Handizvo here kuti muenzaniso wake unotaura nesu? Vechiduku vangakurudzirwa nokuziva kuti vanogona kuva nekutenda kwechokwadi muna Jehovha Mwari pasinei nekuti vemumhuri yavo vanoitei. Tine zvikonzero zvakasimba zvokuva nekutenda mazuva ano nekuti tinoona zvakasikwa zvakatipoteredza, tine Bhaibheri rakazara uye tine mienzaniso yakawanda yevanhu vaiva nokutenda.
ZVAKAITA KUTI CHIBAYIRO CHAABHERI CHIFARIRWE
Kutenda kwaAbheri muna Jehovha zvakwaikura, aida kuwana nzira yokuratidza kutenda kwake. Asi munhuwo zvake aizopawo chii kuMusiki wezvinhu zvose? Zvechokwadi, Mwari haana kana chaaida kuvanhu, chingava chipo kana rubatsiro. Nokufamba kwenguva, Abheri akazoziva chokwadi chinokosha chokuti: Baba vake vokudenga vane rudo vaizofara kana aizongovapa chinhu chakanakisisa kubva pane zvaaiva nazvo aine vavariro dzakanaka.
Saka Abheri akafunga kuuraya makwai sechibayiro. Akasarudza makwayana akanakisisa kureva akatanga kuberekwa uye akasarudza nyama yaaifunga kuti ndiyo yakanakisisa. Kaini akauya nezvibereko zvevhu kuti atsvakewo kufarirwa uye kukomborerwa naMwari. Asi vavariro dzake dzakanga dzakasiyana nedzaAbheri. Musiyano wacho wakazooneka pavakapa zvibayiro zvavo.
Abheri akapa chibayiro chake nokutenda asi Kaini akanga asina kutenda
Kaini naAbheri vanofanira kunge vakashandisa mumwe nomumwe atari yake nemoto wake kuti vapise zvibayiro zvavo, zvichida vachionekwa nemakerubhi ayo aingova oga aimiririra Jehovha panyika. Nyaya yacho inoti: ‘Jehovha akanga akatarira achifarira Abheri nechinopiwa chake.’ (Genesisi 4:4) Bhaibheri haritauri kuti Mwari akaratidza sei kuti afarira chinopiwa chaAbheri. Asi nei akafarira Abheri?
Chibayiro chacho ndicho chakaita kuti afarirwe here? Abheri akapa chisikwa chipenyu achideura ropa racho raimiririra upenyu. Abheri anogona kunge aiziva kuti chibayiro chakadaro chaikosha zvakadini. Papera mazana emakore kubva pakararama Abheri, Mwari akashandisa chibayiro chegwayana rakanakisisa kuti chifananidzire chibayiro cheMwanakomana wake akanga asina chivi anonzi “Gwayana raMwari,” uyo aizourayiwa asina mhosva. (Johani 1:29; Eksodho 12:5-7) Zvisinei, hatinyatsozivi hedu kuti Abheri angava akafunga izvozvo here asi zvinoita sokuti hapana chaaiziva nezvekuti Jehovha aizoshandisa sei zvibayiro.
Chatinonyatsoziva ndechokuti Abheri akapa zvakanakisisa pane zvaaiva nazvo. Jehovha haana kungofarira chibayiro chacho chete asi akafarirawo Abheri. Abheri akapa chibayiro chacho nokuti aida Jehovha uye aiva nokutenda.
Izvi zvakanga zvakasiyana nezvakaitwa naKaini. Jehovha “haana kutombofarira Kaini nechinopiwa chake.” (Genesisi 4:5) Hakusi kuti pane chakanga chakaipa nechibayiro chaKaini nokuti Mutemo waMwari wakatozobvumidza vanhu kuti vape zvinopiwa zvezvirimwa. (Revhitiko 6:14, 15) Asi Bhaibheri rinotaura nezvaKaini richiti “mabasa ake akanga akaipa.” (1 Johani 3:12) Kaini anofanira kunge aifunga kuti zvaiva zvakakwana kungoratidza nechekunze kuti akazvipira kuna Mwari sezvinofungwawo nevakawanda mazuva ano. Pasina nguva zviito zvake zvakazobudisa pachena kuti akanga asina kutenda uye akanga asingadi Jehovha.
Kaini akada kudzidza kuna Abheri here paakaona kuti Jehovha akanga asina kufarira chibayiro chake? Haana. Akatanga kuvenga munun’una wake kwazvo. Jehovha akaona zvaiva pamwoyo waKaini akaedza kumubatsira. Akanyevera Kaini kuti mafungiro ake aizoguma nechivi chakakura. Akamuudzawo kuti ‘aizokwidziridzwa,’ kureva kuti aizofarirwa naMwari kana aizochinja mafungiro ake.—Genesisi 4:6, 7.
Kaini haana kuteerera nyevero yaMwari. Akakumbira munun’una wake uyo akanga asina chaaimbofungira kuti vaende vose musango. Pavakanga vari kusango, Kaini akarwisa Abheri ndokumuuraya. (Genesisi 4:8) Saka tingati Abheri ndiye aiva munhu wokutanga kuurayirwa kutenda kwake. Akafa zvake asi nyaya yake haina kubva yarova.
Ropa raAbheri raiita seraishevedzera kuna Jehovha Mwari kuti atsive kana kuti aruramisire. Uye Mwari akaruramisira paakaranga Kaini pamusana pezvaakanga aita. (Genesisi 4:9-12) Chinotonyanya kukosha ndechokuti muenzaniso waAbheri wokutenda uchiri kushanda nanhasi. Abheri akararama makore angasvika 100 uye upenyu hwake hwaiva hupfupi pane vamwe vakararama panguva yake, asi aiita zvinofadza Mwari kweupenyu hwake hwose. Akafa achiziva kuti aidiwa uye aifarirwa naBaba vake vokudenga Jehovha. (VaHebheru 11:4) Saka tinogona kuva nechokwadi chokuti Jehovha haamukanganwi uye achamumutsa kuti ararame muparadhiso pasi pano. (Johani 5:28, 29) Unoda kuzoonana naye here? Unogona kuzomuona kana ukateerera paari kutaura newe wotevedzera kutenda kwake kunoshamisa.
^ ndima 8 Mashoko okuti “kuvambwa kwenyika” anewo pfungwa yokudyara mbeu, zvichireva kuberekana, saka anogona kureva mwana akatanga kuberekwa panyika. Saka, nei Jesu akataura nezvaAbheri paaitaura nezve“kuvambwa kwenyika” achirega kutaura nezvaKaini uyo aiva munhu wekutanga kuberekwa? Zvisarudzo nezviito zvaKaini zvairatidza kuti ari kupandukira Jehovha Mwari nemaune. Kungofanana nevabereki vake, zvinoita sokuti Kaini ndemumwe wevanhu vasingazomutswi kana kununurwa.
Tevedzera Kutenda kwaAbheri